KEYD: Askari ka tirsan ciidamada Afghanistan oo ku sugan magaalada Kunduz ee woqooyiga Kabul.
Wada-hadalladan ayaa waxaa ka qeyb galaya dalalka Pakistan, Afghanistan, China iyo Mareykanka, waxayna ka dhacayaan Islamabad.
Pakistan ayaa maanta oo Isniin ah (1/11/2016) marti-gelineysa wada-hadallo dib loogu soo nooleynayo hanaankii nabadda Afghanistan. Wada-hadallada ayaa waxaa ka qeyb-galaya Afghanistan, China iyo Mareykanka.
Madaxweynaha oo Difaacay In Xiriirka loo Jaro Iran